အလှည့်ဒုတိယဂီယာ၌ရှိကြ၏ကိုသတိရပါ + သည့်စက်ပြင်ပေါ်တွင်လည်ပတ်သို့ fit ဖို့ဘယ်လို, teapot နောင်တရကြ၏။ (ရှားပါးသောသုံး, အလည်ပတ် slope လျှင်) ။ ဘရိတ်နှင့်ဒုတိယဂီယာမှ switch ကိုရန်လိုအပ်ပါသည် ...
သင်ကလိုအပ်သည့်ပြောင်းပြန်လှုပ်ရှားမှုကဘာလဲ? ပြောင်းပြန်။ ဒီအဖွင့်ကိုဆိုလိုသည်နှင့်ချခေါင်းကို-on ကိုမှအလုပ်မလုပ်ဘူး ... တဦးတည်းဦးတည်ချက်အတွက်ပထမဦးဆုံး။ ထို့နောက်အခြားကျောက reverse အကယ်. ...
လက်မှတ်တွေဖြစ်သည့်လက်မှတ်များအကြားဝိရောဓိ? Darling, 8-13 မေးခွန်း၏ရုပ်ပုံထဲတွင် PRESCRIBING ၏နိမိတ်လက္ခဏာ "ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏ယာဉ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ နောက်ဆက်တွဲ 1 ။ လမ်းအမှတ်အသားများ။4။ သတ်မှတ်ထားသောဆိုင်းဘုတ်များ၊ 4.1 အမှတ်အသား" ။ ဒါပေမယ့် ...
ကို manual ဂီယာအုံပေါ်ဘရိတ်အကြောင်း ...
တစ်ဦးကို manual ဂီယာအပေါ်တစ်ဦးဘရိတ် ... အများစုမှာဖွယ်ရှိ, အခါသင်ဘရိတ်အကြောင်း, သင်နှစ်ခုခြေနင်းတို့သည် clutch နှင့်ဓာတ်ငွေ့နှင့် clutch နှင့်ဘရိတ်ကုိုကြည့်ပေမယ့်မခံခဲ့ရပါပြီ။ အားလုံးညာဘက်ကိုသင်နေ ...
အရေးယူဇုန်မြန်နှုန်းကန့်သတ်လက်မှတ်ထိုး !!! ကန့်သတ် (ပင်နိမိတ်လက္ခဏာမပါဘဲ) အနီးဆုံးလမ်းဆုံအချို့သောနိမိတ်လက္ခဏာလမ်းဆုံငှါ၎င်း, လမ်းဆုံမှဒေသအတွက်သက်ဆိုင်ပါသည်။ ဒုတိယအချက်တွင်နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုမှာဖြစ်ရပါမည် ...
“ ကိုက်” သည်ကားလမ်း၏လမ်းကြောင်းသည်ယာဉ်ကြောစည်းကမ်းများနှင့်အညီဖြစ်ပါသလား။ “ ကိုက်” သည်ကားလမ်း၏လမ်းကြောင်းသည်ယာဉ်ကြောစည်းကမ်းများနှင့်အညီဖြစ်ပါသလား။
“ ကိုက်” သည်ကားလမ်း၏လမ်းကြောင်းသည်အသွားအလာစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီဖြစ်ပါသလား။ “ ကိုက်” သည်ကားလမ်း၏လမ်းကြောင်းသည်အသွားအလာစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီဖြစ်ပါသလား။ နံပါတ် ကိုက်, အပိုဒ် 1.2 အသွားအလာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအရ - ဤကပ်လျက်ပိုင်နက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ ... ပေမယ့်
ယေဘုယျအားဖြင့်အလုပ်အတွက်စာရေးကိရိယာ post ကိုကျော်လွန်တဲ့အကြောင်းပြချက်မရှိဘူးနိုင်ပါတယ်တဲ့အခါမှသာစာရွက်စာတမ်းများကိုစစ်ဆေးဥပမာ DPS အရာရှိမျှအကြောင်းပြချက်များအတွက်မော်တော်ယာဉ်ကိုရပ်တန့်ဖို့ပြောပြနိုင်ရှိမရှိ vatolyubitelyam အကြောင်းကိုမေးခှနျးက, ဒါပေမယ့် ...
loaded TS တိုင်းတာသည့်အခါယာဉ်များ၏ခွင့်ပြုချက်စုစုပေါင်းအလေးချိန်? သို့မဟုတ်မ? အဖြစ်ထုတ်လုပ်သူများက install လုပ်ထားတဲ့ဝန်နှင့်အတူမော်တော်ယာဉ်၏ဝန်အလေးချိန်, ယာဉ်မောင်းနှင့်ခရီးသည်တစ်ဦးခွင့်အများဆုံးအလေးချိန်၏အများဆုံးအခွင့်အာဏာအစုလိုက်အပြုံလိုက် ...
မင်းရဲ့ထင်မြင်ချက် - အလိုအလျောက်သို့မဟုတ်လက်ဖြင့်ဂီယာပိုကောင်းတာကဘာလဲ ??? အကယ်၍ အလိုအလျောက်ဂီယာအုံသည်ရုတ်တရက်ရပ်တန့်သွားပါက၎င်းကိုဆွဲထုတ်။ မရပါ။ ၎င်းသည်ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့ခြင်းအတွက်အလွန်အဆင်ပြေသော၊
လူမူ့ကိုရှင်းပြပြီး“ COMMUNITY road” ဆိုတာဘာလဲ။
လူသိများသော“ ဆက်သွယ်ရေးလမ်း” ကားအဘယ်နည်း။ စက်ရုံများ၊ ဂိုဒေါင်များစသည်တို့မှတဆင့်နည်းပညာဆိုင်ရာမောင်းနှင်မှုအမျိုးမျိုးကို ... ယေဘုယျအားဖြင့်အပြင်လူများ၏ဝင်ခွင့်ကိုကန့်သတ်ထားသည့်နယ်မြေများရှိလမ်းများနှင့်ကားလမ်းများမှာအခြားသူများကလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
လမ်းဆုံလမ်းခွများတွင်မှီရန်ဖြစ်နိုင်ပါသလား? ဘယ်ကိစ္စတွေမှာမဖြစ်နိုင်ဘူး၊ မဖြစ်နိုင်တာလဲ။ စည်းမျဉ်းသစ်များအရယေဘုယျစည်းမျဉ်းသစ်များအရမှီရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ထွက်သယ်ဆောင်ခံရခွင့်ပြုသည့်ခဲ့ကြောင်း။ ဆိုလိုသည်မှာအထက်ပါ ...
နိမိတ်လက္ခဏာနှင့်စည်းမျဉ်းကိုရှင်းပြပါ။ ၎င်းသည်လျှို့ဝှက်ချက်မဟုတ်ပါကအခွင့်အရေးများကိုဝယ်ယူပါသလား။ အဖြူသည်အပြာရှိလျှင် - 60 km / h သို့မြန်နှုန်းကန့်သတ်လျှင်အဖြူရောင်အနက်ရောင် - 80 km / h သို့၎င်းသည်အမျိုးအစားကွဲပြားသည်။
စစ၏မေးခှနျးကို 2.1.1 SDA RF transmit / y က, CTP အာမခံမူဝါဒ, ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ကြေးစာရွက်စာတမ်းများအတွက်စစ်ဆေးရန်။ 2.1.1 ။ ရှိသည်များနှင့်ရဲများ၏တောင်းဆိုချက်အရမှာစစျဆေးဖို့သူတို့ကိုလွှဲပြောင်းရန်: ယာဉ်မောင်း ...
ကင်မရာကိုကြေကွဲမြန်နှုန်းပေါ်ဖမ်းမိ အကယ်. အဖြစ်လျင်မြန်စွာဒဏ်ငွေဆိုက်အသွားအလာ၏အခြေစိုက်စခန်းမှာထငျရှားလေ? Post-အကြောင်းကြားစာဟာ 3-10 ရက်ပေါင်းထံမှလာတံတားများ, အသွင်ကူးပြောင်းမှု, မှစာရေးကိရိယာ priklepleny camcorders သောသူတို့က, နှင့် ...
ဒါဟာလူထုလမ်းများတခုတခုအပေါ်မှာ ATV စီးနင်းခွင့်ပြုသလဲ? အဆိုပါစည်းမျဉ်းများနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ညွှန်ကြားချက်ကိုဖတ်ပါ, အဲဒါကိုအားလုံးကပြောပါတယ်။ ကလိုအပ်သောအလင်းအင်ဂျင်နီယာအမျိုးအစားအလှည့်အချက်ပြတပ်ဆင်ထားခြင်း, ဒါပေါ်မှာ။ ဃလျှင်။ သင်သည်တတ်နိုင် ...
အချိန်ဒဏ်ငွေပေးဆောင်မပါဘူးဆိုရင်ဘယ်အရာကိုဘာဖြစ်သွားမလဲ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကျွန်မခင်ပွန်းနှင့်အတူကဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ သူက (မသိဘဲခရိုင်) မီတာ, တစ်ဦးလူနေအိမ်ဧရိယာထဲမှာမျက်စိကန်းသောလမ်း, တလမ်းအသွားအလာလမ်းသို့လှည့ ...
အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာပြစ်မှုများ၏ကျင့်ထုံး၏ 12,5 3,1 ။ ထပ်ခါတလဲလဲချိုးဖောက်မှုများအတွက် 15 ရက်။ ဤစကားမှန်ပါသလော ငါဥပဒေများအပိုဒ် 12.5 ရည်ညွှန်းဖို့နှိုးဆော်တောင်းပန်၏။ အမှားဒါမှမဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစစ်ဆင်ရေးအရာအောက်မှာအခွအေန၏ရှေ့မှောက်တွင်အတွက်မော်တော်ယာဉ်မောင်းနှင် ...
ဘယ်လိုဟောင်းကိုအမေရိကန်အတွက်ကားတစ်စီးကိုမောင်းနိုင်ပါတယ် ??? ငြ့်အရေးဆိုင်ရာ 16 နှစ်ကျော်နီးပါးတိုင်းအမေရိကန်ရှိသည်။ ရှိပြီးဖြစ်သောမော်တော်ယာဉ်များ၏အထူးအစိုးရအေဂျင်စီဗျူရို (BMV), နေဖြင့်ကိုင်တွယ်ပေးအပ်အခွင့်အရေးများ ...
သာအလယ်မှာထိန်းချုပ်ထားဆုံ turn, t ကို။ အဆိုပါအလှည့်တို့သည်အလှည့်အဖြစ်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်မတ်စောက်ထောင့်မှာ, သင်သာ၏အလယ်တွင်မရောက်မီ left povarachivaetsya ပါဘူး။ ရန် ...
GKU "CBDDMO" ။ ဒီအဖွဲ့အစည်းကဘာလဲ။ ဘာလုပ်သလဲ။
GKU "CBDDMO" ။ ဘယ်လိုအဖွဲ့အစည်းမျိုးလဲ၊ ဘာလုပ်လဲ။ မော်စကိုဒေသ၏မော်စကိုဒေသလမ်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးစင်တာတွင်ပြည်နယ်ဘဏ္treာရေးဌာနတစ်ခုတည်ထောင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်အမိန့်ကိုသင်ဖတ်နိုင်သည်။ အတိုချုပ် - 15.03.2012 10: 01 ...
14 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,335 စက္ကန့်ကျော် Generate ။